R Nirina, Auteur à déliremadagascar
Non classé	 29 juin 2022 R Nirina
Une levée de drapeau, organisée par Ravinala Airports, gestionnaire des aéroports internationaux d’Antananarivo et de Nosy Be, s’est tenue le vendredi 24 juin à l’aéroport d’Antananarivo pour célébrer la fête de l’indépendance, en présence des représentants de toutes les entités aéroportuaires et aéronautiques, et en particulier de l’Aviation Civile de Madagascar et de la Commune d’Ivato. Continuer la lecture →
Socio-eco	 29 juin 2022 R Nirina
1% amin’ny tetibolam-panjakana ihany anefa no natokana hiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara kanefa mitondra fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy ny harena voajanahary. Continuer la lecture →
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny 22 jona 2022 ny « maison digitale pour les femmes » tao Fort Dauphin. Continuer la lecture →
Socio-eco	 28 juin 2022 R Nirina
Manana ny tanjany ara-toekarena ny faritra Atsimo Andrefana sy Anosy raha tsy hilaza afa-tsy ny sehatry ny jono sy ny fambolena. Continuer la lecture →
Socio-eco	 26 juin 2022 R Nirina
Mizara fifaliana hatrany ireo fikambanam-behivavy « porte bonheur ». Continuer la lecture →
Socio-eco	 22 juin 2022 R Nirina
Ezahana hiverina toy ny teo aloha. Mila fotoana lava ny fanarenana ireo ala sy zavaboahary ao amin’ny toeram-pitrandrahana Ambatovy ao Moramanga. Fanarenana ny rohivoahary no atao . Continuer la lecture →
Socio-eco	 21 juin 2022 R Nirina
Hetsika fanaon’ny kaominina Alasora isan-taona ny mizara sakafo mafana ho an’ireo ankizy mpanala fanadinana CEPE. Mpiadina sy mpandraharaha miisa 1600 no nahazo izany nandritra CEPE 2022. Continuer la lecture →
Socio-eco	 20 juin 2022 R Nirina
Volana natokana ho an’ny ankizy ny volana jona. Mikarakara andro ho an’ny firaisankina (journées solidaires) ny Orange Madagascar ho fanomezana lanja ny ankizy sy hampifaliana azy ireo. Continuer la lecture →
Niova ho UP TV ny radio Plus TV. Fanavaozana lehibe entin’ny vondrona TVPLUS Madagasikara sy ny Startimes ity fanovana ny anaran’ny Radio Plus ho UP TV ity. Continuer la lecture →
Socio-eco	 17 juin 2022 R Nirina
Ankizy sy tanora 332 avy amin’ny firenena efatra (Frantsa, Espagne, Burkina Faso, Madagasikara) no niara-nanatontosa tamin’i Pierre Beccu ny horonantsary mitondra ny lohateny hoe “Graines d’espoir”. Continuer la lecture →